Ny fanomezana snacks krismasy ankafizin'ny zazavavy dia nanova ny fonosana！
Ho avy tsy ho ela ny Krismasy. Tsy andro iray izay mampifaly ny fahatongavan'ity taona vaovao ity fa andro iray hifampizarana fanomezana sy hifampiarahabana. Hanaraka izany ny fanontana voafetra natokana ho an'ny orinasa isan-karazany. Ahoana ny fomba tsy hahitanao an'ity vintana lehibe ity?
Ny fanomezana noely, midika hoe tsy ampoizina, tsy manam-paharoa. Marika maro no hisambotra an'io fotoana io hanoritana fotoana samihafa amin'ny Krismasy na dia famoronana mamorona amin'ny fonosana aza. Ireto misy fonosana Krismasy tian'ireo zazavavy, ary angamba mety hanome aingam-panahy anao.
Starbucks dia nilalao marketing amin'ny fonosana nandritra ny taona maro, ary tsy ankanavaka ity Krismasy ity.
Tamin'ny taona 2020, Starbucks dia namoaka zava-pisotro Krismasy telo, dia ny Tafé Hazelnut Latte, Lava Black Mocha ary ny Flowing Gold Christmas Tea Latte.
Ny mugia Krismasy amin'ity taona ity dia mampiditra vongan-dranomandry, kintana ary afomanga amin'ny famolavolana, mitondra rivo-piainana Krismasy matanjaka sy feno zaza-jaza. Miaraka amin'ny kaopy vaovao sy mety toy izany dia tian'ny rehetra izy io.
Ho fanampin'izany, nandefa andiana vokatra peripheral toy ny rojo vy, pendants Krismasy, mofomamy Krismasy sns ihany koa i Starbucks mba hanomezana fahafaham-po ny filan'ny olona isan-karazany.
Ny fanovana ny fonosana Starbucks dia nihaona tamin'ny andrasan'ny olona amin'ny Krismasy sy ny fampitomboana ny maha-izy ny mpampiasa. Inoana fa ny fiovan'ny Starbucks amin'ny volana desambra dia haneho ny lanjan'ity marketing ity.
2. olon-tiana fotsy
Shiroi Koibito dia malaza noho ny dikany am-pitiavana, ary amin'ny Krismasy dia misafidy mena ho lohahevitra izy ary maneho ny sary amin'ny karnavaly Krismasy ao anaty boaty. Mahagaga fa ny kitapo fonosana cookie dia fanontana Krismasy manokana ihany koa. Toa avy amin'i Dadabe Noely ity fanomezana ity.
Mampihomehy foana ny fonosana M & M, ary amin'ity taona ity, hankalazana ny Krismasy, nametrahan'ny fianakavian'i M & M ny satroka Santa tamin'ny lohany.
Ny Krismasy dia tsy vakansy fotsiny, fa fotoana mety koa hanaovana dokam-barotra isaky ny marika. Ny fonosana ho an'ny fotoana dia tsy hita taratra fotsiny amin'ny lamaody amin'ny orinasa, fa koa mampita ny fahatsoran'ny orinasa amin'ny mpanjifa, mampitombo ny fahatsapan'ny mpanjifa.
Ny olona sasany dia milaza foana fa ny marika lehibe ihany no mila manararaotra ny toe-javatra hampiroborobo. Raha ny marina, ny festival dia fotoana mety amin'ny fampiroboroboana marika kely. Amin'izao fotoana izao, ny vokatra tsara ihany miaraka amin'ny fanaovana dokambarotra tsara no afaka mitana andraikitra maro. Ny fonosana Beyin dia afaka manome anao endrika isan-karazany amin'ny famolavolana harona fonosana sy serivisy famokarana hihaona amin'ny filan'ny tsirairay amin'ny kalitao sy serivisy tsara.
Raha mbola tsy nahatratra ny Krismasy ianao dia aza hadino ny taona vaovao amin'ity teboka lehibe ity.